95% amin'ny olana mihidy dia azo vahana miaraka amin'ity andiany iray ity!
Home / Interior design / 95% amin'ny olana mihidy dia azo vahana miaraka amin'ity andiany iray ity!
2021 / 07 / 27 FisokajianaInterior design 6094 0
Araka ny fitenenana, "ny antsipiriany dia mamaritra fahombiazana na tsy fahombiazana". Ho an'ny famolavolana, angamba fomba fanakatonana izay toa tsy takatrao, tsipiriany tsy misy dikany fotsiny, dia hamela ny fotoana mety hialana. Ny fanidiana tsara indrindra dia ny famitana farany ny volavolanao, ary ho fisongadinan'ny haingo.
Fantatsika rehetra ny maha-zava-dehibe ny lohateny lehibe amin'ny famolavolana sy ny fanamboarana azy, fa ahoana no fomba anaovanao azy amin'ny famolavolana anao amin'ny antsasaky ny fiezahana? Ahoana ny fomba hieritreretana araka ny tokony ho izy ny lojika ny fisainana ny fanidiana ny sisiny? Andao hiresaka momba azy io anio, hamahana ireto olana manaraka ireto.
Inona no atao hoe hemming?
Inona avy ireo karazana hemamioma?
Ahoana ny fampiharana ny hemming amin'ny praktika?
Ny teboka famolavolana ny olana fanidiana.
a .Famaritana ny hemming
Ny fanidiana dia ny fizotran'ny fananganana sy ny fanazaran-tena eo amin'ny fihaonan'ireo fitaovana samihafa na mitovy. Amin'ny alàlan'ny famaranana farany, ny zoro sy ny fanidiana ny sisiny, ny zorony ary ny faritra voatondrony dia voahodina.
▲ Kofehy boribory miendrika Z
Ho fanampin'izany, rakofana fitaovana famaranana ary alaviro ny fitaovan'ny fakany ahitra mba hahatratrarana ny lesoka amin'ny haingon-trano farany, na mampiasa fitaovana manokana handravahana ireo faritra tetezamita eo anelanelan'ny haingon-trano haingo mba hampitombo ny vokatra haingo.
b. Fitsipika fanidiana
Ny famehezana dia toa tsotra, fa ny tena fanamboarana dia tsy ho tsy fahampian'ny fomba tsy mety isan-karazany. Ny tena fahita matetika dia ny tranga fanidiana tsy mandeha amin'ny laoniny na tsy mendrika, araka ny aseho amin'ity sary manaraka ity.
▲ vato eo an-joron-trano hamela banga.
Ny fananganana vato yin sy ny zoro Yang dia tokony ho 45 ° zoro (mila fanodinana orinasa)
▲ Fametrahana vato vato.
Ny banga vato sy ety ambony dia lehibe loatra
Ny vato dia tsy mety amin'ny gorodona, ary tokony ampiana amin'ny fanidiana.
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mijery ny endrika manodidina anao ary mitady ireo "olana" ireo izay hita na aiza na aiza.
Mety misy ny mpiara-miombon'antoka amin'ny antsipiriany sasany amin'ny famolavolana, mahatsapa fotsiny fa tsy tsara tarehy izy io, tsy mahazo aina. Ny fomba hiatrehana ny manokana dia tsy mazava, na fantatra hoe aiza ny "olana", fa tsy ny fomba mety hamahana azy.
① Lalàna fanidiana natoraly.
Na ny sisiny na ny fanidiana azy, ny vokatra tsara indrindra dia ny fikorianan'ny voajanahary amin'ny fifandimbiasam-pahaizana samihafa. Te ho afaka "mahamenatra" mpikambana ny fisokafana na ny fototra, fa koa "tsara tarehy" mba hanatsarana ny haingon-trano vokany, ny fahaiza-manao tokony ho lany.
Torohevitra fikirakirana: ny fanidiana rehetra, tokony hapetraka amin'ny toeran'ny zoro alokaloka. Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny maka antoka fa manana hevitra tsara momba ny zavatra ataonao ianao.
▲ Hazo fisorohana zorony Yang
②Fotopampianarana hitsarana ny famaranana.
1) Vokatry ny famolavolana: Diniho ny hatsaran-tarehy, ny fahasarotana ary ny hakitroky ny endrika hametrahana fomba mety amin'ny fanidiana.
2) Toetran'ny fitaovana: safidio ny fomba fanidiana mety mifanaraka amin'ny fitaovana mba hahazoana antoka ny fandrindrana sy ny fitovian'ny endrika.
3) Fanaraha-maso ny vidiny: Aza manenjika fomba fanidiana mihidy sy sarotra, ary ampiasao fomba fanidiana tsotra sy mety eo ambanin'ny fiantohana ny fiantohana ny vokatry ny famolavolana.
Ny endrika fanidiana mahazatra
Ny fanidiana ny haingon-trano ankapobeny dia mizara ho karazany telo: fanidiana ny tany madio, fanidiana ny rindrina madio, fanidiana ny rindrina sy ny tany. Ary ny fanidiana dia azo zaraina ho sokajy 3 lehibe arakaraka ny endrika: tsindry faneriterena, fametahana, fametahana seams, seams staggered, ary fifandonana.
▲ endrika fanidiana
Ground Tany madio
▲ rindrina madio
▲ Rindrina sy tany
▲ Fanontana skema
Ny tsindry gazety dia iray amin'ireo fomba fampiasa indrindra amin'ny fanidiana haingon-trano iray manontolo noho ny fanamboarana tsotra, ny vidiny mirary ary ny vokany tsara tarehy.
Ny tsipika fanaovan-gazety koa dia mizara ho fisarahana fisarahana, crimping strips, sheathing line, zoro mpiaro, haingon-trano strips sy singa hafa. Ampiasaina betsaka amin'ny fizarana ara-materialy, ny fanidiana ny zoro ary ny zorony Yang, ny fanidiana ny sisiny, ny haingo maodely ary ny sehatra hafa fanidiana azy ireo.
b. avelao seam
▲ Mijanona amin'ny skotisma seam
Ny teknikan'ny fitsaboana ny famoahana seam dia ny mamela elanelana misy eo amin'ilay fitaovana sy ny fitaovana mankany amin'ny tetezamita, izay azo ampiharina amin'ny fizarana ny haingon-trano misy faritra lehibe kokoa sy ny vodin'ny fiaramanidina misy fitaovana roa. Izy io dia afaka miatrika ny fanitarana sy ny fihenan'ny vanin-taolana, ary koa ny fampitomboana ny fahatsapana ny ambaratonga ambony.
c. seam voahidy
▲ Sary namboarina staggered
Ny seam mihombo, fantatra ihany koa amin'ny fanidiana ny elanelana avo lenta, dia ny lafiny roa amin'ny fitaovana dia tsy nakatona anaty fiaramanidina.
Mety kokoa amin'ny fampiasana mivantana ny fanidiana rehefa tsy azo atao fisaka ny fitaovana roa.
. Skema fifandonana
Ny bokotra dia antsoina koa hoe seam akaiky, izay dikan-teny lava an'ny seam mijanona. Izy io dia mampifandray mivantana ireo fitaovana mba hamoronana ny fahatsapana fitaovam-panamiana iray manontolo.
Ny seam dia hampitombo ny vidin'ny sarotra sy ny fanamboarana, noho izany ny haben'ny seam eo anelanelan'ny mitsangana sy ny marindrano dia mila fehezina tsara rehefa mampiasa ny fitsaboana seam, indrindra ny faritra izay hita mazava amin'ny sehatry ny fahitana.
Ity fanao ity dia matetika ampiasaina amin'ny fitaovana vy amin'ny fanodinana seam akaiky sy ny fepetra takiana amin'ny fahamendrehana ambony modely (toy ny: lamina vato lehibe, lamina vita amin'ny hazo, sokitra vy, sns.) Ampiasaina.
Ny fametahana dia afaka manarona saika ny lesoka rehetra amin'ny fanakatonana haingon-trano, fa ny faharetan'ny fametahana dia tsy avo, mora mavomavo.
Mampiasà scenario: Rehefa mampiasa fomba fanidiana hafa, dia misy lesoka, mampiharihary ny eny ifotony, tsy voafehy ny famehezana, azo sitranina amin'ny alàlan'ny fametahana.
Ampahatsiahivina: ny hametaka dia ny manafina ny kilema fotsiny, fa tsy ny fanehoana ny hakanton'ireo antsipirian'ny fanidiana. Tsy ampirisihina hampiasa amin'ny ankapobeny.
Ireto karazana fanakatonana dimy ireto dia ny lojika farany ambany, fa tsy mahaleo tena. Rehefa tena mampiasa azy ianao dia azonao ampiasaina irery na miaraka.
Fampiharana azo ampiharina amin'ny fanidiana
Rehefa avy mianatra ireo karazana fomba fanakatonana dimy etsy ambony, ahoana ny fampiasana azy amin'ny fampiharana? Andao haka ohatra iray.
a. Loha varavarana eo an-joron'ny olana mihidy
Ity olana ity dia "olana" fanidiana mahazatra kokoa, mora tohina amin'ny antsipiriany momba ny olana. Manaraka izany, amin'ny alàlan'ny maodely fisainana "fanidiana ny sisiny" hanomezana ireo karazana 3 amin'ny famahana olana. Amin'izany fomba izany, vahaolana azo ampiharina amin'ny olan'ny fanidiana eo amin'ny zoron'ny lohan'ny varavarana.
Vahaolana 1: seams staggered
Ampidino kely ny valindrihana avo, mba hahafahan'ny fifandraisana misy eo amin'ny valindrihana roa hamorona zaitra mihanjahanja, io no vahaolana tsotra indrindra sy ambany indrindra.
Vahaolana 2: Tady fanerena
Manampia kofehy eo an-joron'ny valindrihana atsangana mba hampidirana azy amin'ny valindrihana ambany.
Ny tsipika dia mety ho fantsom-by tsy misy fangarony, tsipika mpiambina zorony rakotra loko latsa-tratra, na tsipika napetraka am-baravarana.
Vahaolana 3: Avelao ny banga
Avelao ny valindrihana avo sy iva hampiasa elanelana (seam seam) amin'ny tetezamita voajanahary, mba hahafahan'ity banga ity hanakona ny tsy fahampian'ity toerana ity, hanana andraikitra tsara, fa koa hahatratrarana ny tanjon'ny fanidiana.
b. olan'ny fanidiana ny andilan-tratra
Famakafakana ny olana: tsy mazava ny fifandraisan'ny vy sy ny fantsom-baravarankely fanakatonana, ka tsy manarona ny tadin'ny vy ny tadiny.
Vahaolana 1: tsindry fanerena
Ny tsindry fanerena dia ny tadin'ny vy tsy misy fangarony tafiditra ao anaty fitaovana famaranana, mba hahafahany mamorona iray manontolo. Na izany aza, ity fomba ity dia mitaky ny fahamendrehan'ny trim.
Vahaolana 2: fifandonana
Ny fifandonana dia ny famelana ny sisin'ny tsipika sy ny fantsom-by tsy miova ao anaty fiaramanidina iray ihany, ity fomba ity dia mitaky fametrahana mazava tsara amin'ny sisin'ny tsipika.
Vahaolana 3: seam seam
Avelao hiala ny sisin'ny vy tsy misy fangarony, ity fomba ity dia sarotra kokoa ny manamboatra azy, ary ny vidin'ny fananganana ambany. Fa io kosa dia hahatonga ny valiny ho convex, mila manamafy ny mpamorona.
d. Ny olana amin'ny fanidiana ny varavarana sy ny fanidiana ny tsipika
Famakafakana ny olana: ny tsipika fanakonana varavarana ary ny filiranao ny fifandraisana tsy mety eo amin'ny fanidiana
Vahaolana 1: fifandonana
Ny tsipika skirting dia lava na soloina amin'ny pantsam-baravarana, izay fomba mahazatra indrindra hamahana.
Vahaolana 2: Fitsaboana manokana
Raha any amin'ny faritra misy rano izy io, dia azonao atao ny manampy dite vato eo ambanin'ny tsipika napetraka mba hikatona.
Vahaolana 3: fifandonana (fanapahana zoro)
Raha ny fiantsonan'ny vavahady dia miova tsy miova, ny tsipika napetraka 45 ° dia manapaka ny zoro, ka ny tsipika napetraka sy ny fifandonana eo am-baravarana dia vita. Ity no vahaolana mitahiry vola be indrindra.
Hevitra famolavolana ny olana famaranana
a. Fifandraisan'ny fitaovana
Eo amin'ny fihaonan'ireo fitaovana, indrindra ny zoro yin sy ny Yang ary ireo fitaovana samihafa amin'ny fanidiana, dia tokony hazava eo anelanelan'ny fitaovana manery izay, iza no mahazo hoe iza ny fifandraisana lojika.
Toy ny: fanakatonana crimp vita amin'ny vy sy hazo amin'ny gorodona vy, tontonana fanidiana volo hazo ary fanidiana ny fifandonana vato, fanimbana hazo ary fametahana sary miampy fanakatonana inlay.
▲ Mitazona skema
b. Fitsaboana ny antsipirian'ny fananganana
Amin'ny fananganana samihafa ny antsipiriany momba ny fanidiana, mifantoha amin'ny fampifanarahana ny zaitra, na mikatona mafy ny fanidiana azy, na mety misy fivoahan'ny seams, sns.?
Ary koa ny antsipirian'ny fanaraha-maso ny fananganana, mifantoha amin'ny fanamarinana ny fampifanarahana ny fanidiana sy ny fantsom-pifandraisana.
Fanaraha-maso kendrena ny varavarana sy ny varavarankely, ny elanelana fanidiana ny ambaratonga ary ny tsy fitoviana amin'ny haavony, ny taila, ny rindrina, ny gorodona, ny daka amin'ny toe-javatra seam. Zahao ihany koa ny fanidiana ny fantson'ny gorodona ao amin'ny fandroana, ny tany sy ny fikororohana ary ny zoron'ny rindrina fanidiana, sns.
d. Ny tontolon'ny fitaovana azo itarafana
Eo akaikin'ny fitaratra, vera, fitaovana famaranana mamirapiratra avo, hamaritana raha misy loharano maivana, na hita taratra amin'ny zava-misy eny ifotony ny fanidiana azy io?
Raha izany dia tokony hotandremana ny alokaloka ny hazavana na ny famitana farany mba hisorohana ny loza mety hitranga amin'ny vakana vakana.
Eny, ny atin'ny fikatonan'ny sisiny no hazavaina aminao eto aloha. Ny olan'ny fanidiana ny fananganana tena izy raha ny marina mihoatra ireo, fa ny lojika ifotony dia mitovy. Rehefa sendra olana ianao dia azonao atao ny mampihatra ilay maodely fisainana "fikatonana". Tena hanampy anao izany.
Previous :: Ny mpivady, ny loholona roa, ny taranaka telo mitovy endrika amin'ny endrika famolavolana! Next: Reinvent The Rustic isan'andro, fiainana mety amin'ny zaridaina an-tanàn-dehibe 丨 LICO Design
2021 / 08 / 15 5725
2021 / 08 / 15 6288
2021 / 08 / 15 6071
2021 / 08 / 14 5787
2021 / 08 / 14 6327
2021 / 08 / 14 5498